Gold AYA Motors International Group 1 year anniversary event - 资讯 - 新闻频道 - 仰光(yangon)智慧生活
[摘要] Gold AYA Motors International Group 1 year anniversary event
Gold AYA Motors International Group ၏ 1st Year Anniversary Road Show ပွဲကို Junction Square တွင်ကျင်းပ
Gold AYA ၏ Road Show ပွဲတွင်Jetour X70 ၊ BYD F3 နှင့် CHANGHE Q35 တို့ကို အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Road Show ပွဲတွင် Monsoon Season End Promotion အနေဖြင့် Jetour X70 ကို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ယာဉ်တစ်စီးလုံးအာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ် (သို့) ကီလို ၁ သိန်းခွဲ၊ အင်ဂျင်ပစ္စည်း အကန့်အသတ် အာမခံသက်တမ်း ၁၀ နှစ်(သို့) ကီလို ၁ သန်း၊ ပထမဆုံး ၃ နှစ်အတွင်း အခမဲ့ ၆ ကြိမ်တိတိ အခြေခံကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည့်အခွင့်အရေးများ၊ CHANGHE Q35 နှင့် BYD F3 တို့ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ၈သောင်းကျပ်အထိ တန်ဖိုးရှိသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ တစ်နှစ်စာ အာမခံကြေးအခမဲ့လက်ဆောင်၊ ၆ သိန်း ၂ သောင်းကျပ်တန်ဖိုးရှိ E-Bike တစ်စီးမေတ္တာလက်ဆောင်၊ ၂ သိန်းကျပ်တန်ဖိုးရှိ City Mart Gift Card တို့ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မည်သည့်ကားအမျိုးအစားကိုမဆို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ၂၆ သိန်းအထိတန်ဖိုးရှိသော Gold AYA တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ရွှေဆွဲပြားများကိုလည်း ကံထူးနိုင်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Gold AYA ၏ Jetour X70 ၊ CHANGHE Q35 နှင့် BYD F3 တို့ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ Junction Square တွင်စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှ ၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် Gold AYA Motors International Group ၏ 1st Year Anniversary Road Show သို့သွားရောက်ကာ စိတ်တိုင်းကျ ကြည့်ရှုလေ့လာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Gold AYA Motors International Group 1st Year Anniversary Road Show Held at Junction Square
Jetour X70, Gold AYA Road Show BYD F3 and CHANGHE Q35 are on sale with special offers. If you buy the Jetour X70 asaMonsoon Season End Promotion at the Road Show, you will geta5 year warranty or 150,000 kg. Engine parts limited warranty period of 10 years or 1 million kg. During the first3years, you will get6free basic car repairs. If you buy CHANGHE Q35 and BYD F3, you will get one year warranty free gift with gifts worth up to 80,000 Kyats. An e-bike worth 620,000 kyats isacharity gift. You will getachance to getaCity Mart Gift Card worth 200,000 Kyats. In addition, if you buy any type of car, you will also be able to win Gold AYA Anniversary Gold Plates worth up to 26 lakhs.
Gold AYA Jetour X70; Those interested in the CHANGHE Q35 and BYD F3 can visit Gold AYA Motors International Group's 1st Year Anniversary Road Show at Junction Square in Yangon from September4to 6.
关键词： Gold AYA Motors International Group 1 year anniver